Ahmiyada ay leedahay abuuritaanka magac wanagsan ee sumad ama shey | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Design Graphic, Khayraadka, dhowr
Muhiimadda abuurista wanaagsan magacyada ee a sumad ama badeecad es muhiim ah hal abuure iyo ganacsade ba. The magaca summad o wax soo saarku wuxuu noqon karaa qeyb aasaasi ah guul ama guuldaro maaddaama ay tahay habka keliya ee isticmaalayaashu wax uga qaban karaan iyada iyo astaamaha adeegsadayaasha marinkan isgaarsiinta.
Ogow iyada ahmiyada magaca astaan oo yaqaan sida wanaag loo sameeyo habka of magacyada Waa tallaabo aasaasi ah marka la qeexayo magaca nooc, wax soo saar ama xitaa nooc mashruuc ka mid ah. Qaab dhismeedka macluumaadka, raadinta tixraacyo iyo sameynta soo jeedin ku saleysan tilmaamo taxane ah oo horey loo dejiyey ayaa fure u noqon kara guulaystay shaqadayada.
Markay tahay inaan shaqo qabano magacyada waxaa aad loogu talinayaa inaad haysato ku filan macluumaad iyo tixraacyo dhammaan noocyada ganacsiga ama tixraacyada kale ee u adeegi kara kicinta hal abuurka. Tixraac wanaagsan ayaa ah Fernando Beltran ahaanshaha xirfadle weyn inta lagu gudajiro hawsha magacyada loogu talagalay noocyada iyo alaabada. Waxaan sidoo kale ka raadin karnaa macluumaadka qadka, buugaagta, ama ilo kale.
Marka hore waxaan sameyn doonaa falanqeeyaan sumadeena: qeexaan qiyamkooda, ficilladooda, waxa ay qabtaan, halka ay ka qabtaan, ujeeddooyinka, cidda ay ku wajahan yihiin ... iwm
Aynu bilowno sameynta a burburka astaamaha ugu muhiimsan of our astaanta ama wax soo saar hab aan si cad u arki karno qodobbada muhiimka ah (nuxurka) sumadda. Waxaa lagugula talinayaa inta lagu gudajiro hawshan magacyada u adeegsanno waxyaabo garaaf ah si aad u sameysid waxyaabaha ku burburaya, waxaan isticmaali karnaa sabuuradda, midabada ... iwm
Talaabooyinka oo kooban magacyada waxay noqon kartaa waxyaabaha soo socda:
La kulan: ogow astaanta iyo qiimaheeda.
Buscar: macluumaad, tixraacyo lagu ogaanayo waxa horay uga jiray mowduucaas.
Maskaxda xorta ah (maskaxda fur): kala jebinta fikradaha suuragalka ah ee magacayaga, xiriir samee ... iwm.
Ka dib markaan ogaano sida calaamadeena ay tahay, waa inaan bilowno macluumaad ka hel la xiriira qiyamkaas aan horay u qeexnay. Waan raadin karnaa macluumaad guud ama aad ka hesho macluumaad ku saabsan asalka magacyada sumadaha jira.
Tallaabada xigta waa inay noqotaa furo maskaxda iyo bilaabaan dhisida xiriiro calaamadaha ee sumadeena. Fikradda ayaa ah in la raadiyo: cilaaqaadka, ereyada ereyada, iyo dhammaan noocyada fikradaha ah ee naga caawiya inaan taas helno magac ku habboon astaanteena ama wax soo saarkeena.
Hadda waxaan arki doonnaa tusaale yar si loo abuuro suurtagal magacyada shirkad khiyaali ah.
Este guddi khiyaali ah doonaya inuu abuuro magaca a APP ee gaadiidka dadweynaha, inta badan waxay rabaan inay diirada saaraan basaska iyo wadaagista baabuurta (tixraac blablacar). Kuwa ku gaadha dhagaystayaal caalami ah sababtaas awgeed waxay jeclaan lahaayeen in magacoodu ku jiro Ingiriis.
Waxaan bilaabay inaan raadi tixraacyada iyo ereyada muhiimka ah matalaya arjiga:
suurtagal ah ereyo muhiim ah: gaadiid, gaari, bas, dhaqaale.
Magac ku saleysan matalaada warshadaha dalabka halkaasoo adeegsadayaasheedu u guurayaan inta badan: baabuur iyo bas. Labadan erey loo rogay ingiriisi waxaan heleynaa ereyga BAARIS, eray fududahay in la xasuusto taasina waxay la xiriirtaa ficilka dalabka.
By habka Raxmadda aan aragno magacyada ee sumadda taleefanka gacanta aamiin.
Aamina wuxuu leeyahay magac ku saleysan xiriirka erayga "wacan" oo leh qiimayaasheeda: da 'yar, ka duwan, ka duwan, shirkad shaqo-abuur leh, oo ka fog caajis iyo wax-qabad joogto ah. Miyay yihiin qiyamkaasi iyo tan habka adduunka loogu iibiyo taas oo ka dhigaysa magacooda inuu shaqeeyo marka la abuurayo xiriirkan maadaama ay iyagu isku iibinayaan habkaas oo aysan ahayn mid kale. Haddii aan isla magacan u dhigno shirkad kale oo taleefannada gacanta ah ma heli karno isla natiijada maxaa yeelay shirkadaha kale sidaas uma iibiyaan. Markaad gasho waxaan garwaaqsan nahay muhiimadda tcadee qiimaha marka la abuurayo magac qeexaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Ahmiyada ay leedahay abuuritaanka magac wanagsan ee sumad ama shey
Taariikhda astaanta Apple